Emmet မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
14 / 02 / 2021 15 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 598 Views စာ0မှတ်ချက် 21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ, 71741, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, Emmet, Harley Quinn, Ideas, ဂျေး, ဂျိုကာ, အမွေအနှစ်, Lego, Lego Batman Movie,, Lego Ideas, Lego နဂါး Fighters, Lego ရုပ်ရှင်, Lego Ninjago, Lucy, Ninjago, NINJAGO အမွေအနှစ်, nya, အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင်, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art, ထိပ်တန်းငါးခု, Vampire, နေပြည်တော်
ခုနစ်နှစ်ကြာသော် The LEGO Movie အကြောင်းသင်မသိသောအရာခုနစ်ခု
14 / 02 / 2021 14 / 02 / 2021 ခရစ် Wharfe 868 Views စာ0မှတ်ချက် 21 ဤနေရာသို့သွားရန်လမ်း, Batman, Channing Tatum, ခရစ် Miller, ခရစ် Pratt, ဧလိရှဗက်ဘဏ်များ, Emmet, Ennio Morricone, ယောနဟေးလ်, Lego, Mothersbaugh ကိုမှတ်သားပါ, သတ္တုတွင်း, Nick offerman, ဖီးလ်သခင်, ဆာဂျီယိုလီယွန်း, အဆိုပါ Lego ရုပ်ရှင်, မင်္ဂလာပါ, Vitruvius, အလိုတော် Arnett, နေပြည်တော်
The LEGO Movie ရိုက်ကူးသည့်ဖန်သားပြင်မှခုနစ်နှစ်ကြာခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ သင်မသိသေးသောအချက် (၇) ခုရှိသည်
01 / 02 / 2019 25 / 11 / 2019 ရော့ Paton 3847 Views စာ0မှတ်ချက် 2019, 70840 Apocalypseburg မှကြိုဆိုပါတယ်!, Batman, D2C, Emmet, အထူးအခွင့်အရေးရှိသော, Green Lantern, Harley Quinn, Lego, Lego အရူးမက်စ်, Lego ၏ဝံ, Lucy, ရေးခြစ်ရဲ, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art
The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art 70827 Ultrakatty နှင့် Warrior Lucy! ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
19 / 12 / 2018 25 / 08 / 2020 ဂရေဟမ် 3472 Views စာ0မှတ်ချက် 70827 Ultrakatty နှင့် Warrior Lucy!, Emmet, အသေးစား, သေးသေးလေး, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art, မင်္ဂလာပါ, နေပြည်တော်
Unikitty သည်သူမ၏အတွင်းကြောင်ကြီးအား LEGO Movie 2: The Second P တွင်ပြသခဲ့သည်art 70827 Ultrakatty နှင့် Warrior Lucy!
The LEGO Movie230340 Emmet's Piece Offering polybag တွေ့ရှိခဲ့သည်
18 / 12 / 2018 19 / 12 / 2018 ဂရေဟမ် 2099 Views စာ0မှတ်ချက် 2019, 30340 Emmet ရဲ့အပိုင်းအစပူဇော်သက္ကာ, Emmet, Polybag, The Lego ရုပ်ရှင် 2, The Lego ရုပ်ရှင် ၂: ဒုတိယအချက်art
နောက်ထပ် LEGO ရုပ်ရှင် 2: ဒုတိယ Part polybag set ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်, 30340 Emmet's Piece Offering ။ တတိယ polybag